DRC: Dib u eegida saxaafadda kiniinkan Isniinta 08 April 2019 - Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS DRC: KENDNISH PRESS RELEEDA WAXAY MONDAY 08 APRIL 2019 - AFRICA
DRC: Dib u Eegista Sheegashada Shiinaha ee Isniintii 08 April 2019 - Afrika
- Iskudhin ka timid booqashadii Keisekedi ee Washington, tikidhka CACH-FCC ee Golaha Qaranka, kuwan ayaa ah mawduucyo ka dhigay bogga hore ee saxaafadda subaxii hore ee Kinshasa.
Horyaalka POTENTIAL midkood subixii: "Faahfaahin ka timid booqashadii Fatshi ee Washington, furitaankii Isniintii ee ahaa wadahadaladii tooska ahaa ee DRC-IMF". Wargeyska maalinlaha ah ee Bas-Congo ayaa muujinaya in dabayaaqadii dhammaadkii bishii November 2012 ee barnaamijka labaad ee dhaqaalaha ee dawladda (PEG 2), DRC ay go'aansatay in ay dib u xirto Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta. Gudoomiyaha gobolka, Felix Tshisekedi ee Washington ayaa aasaasay gundhigga wadaxaajoodka dhammaadka heshiis cusub oo rasmi ah oo lala galo IMF. Isniinta xarun ka tirsan Sanduuqa, ayaa qoray wargeyska qarsoodiga ah, khabiirada Congolese iyo IMF ayaa bilaabay wada xaajood toos ah, kuwaas oo gabagabeyntan ay ka soo baxayaan baaritaan dhamaystiran oo ah xisaabaadka guud ee DRC.
Mawduuca A Title ee madaxiisa: «Ka dib markii ay dhacdooyinka khatarta ah ka dib natiijooyinka senatariga, tigidhka Mabunda-Kabund, ballanqaadka guurka FCC-CACH». Run ahaantii, waxay ka muuqataa wargeyska maalinlaha ah ee Limete in labada lammaane FCC-CACH gacanta ay gacanta ku hayso. Tikidka Mabunda-Kabund, oo loogu talagalay inuu hogaamiyo talada Golaha Qaranka waa sawir fiican.
Inkastoo dheelitirka awoodda ee ay guushu ku Front ee caamka ah ee Congo (FCC), taas oo uu leeyahay aqlabiyad buuxda ee (xigeen 340 / 500) Chamber, Bureau ayaa sidoo kale lagu qabtay account siinayaa isbahaysiga. Haddii kale, ayaa sheegay in wargeyska, Cape Platform ee Isbaddalka (CACH) oo helay kuraasta keliya 48 ee Barlamaanka Qaranka sheegan karin in mashquulin ku-madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dambe, macluumaad Brother.
Dhanka kale AVENIR, waxay eegaysaa doorashooyinka golayaasha gobolka Ituri iyo cinwaanka: "Sammy Adubango, waa barnaamij hodan ah". At Assembly gobolka ee wada tashiyo, waqtiga CENI la ixtiraamo iyo the first to idlaan ka hor cod ahaa Sammy Adubango, oo xubin ka ah Congress Congo Qaranka, iyo CNC Ticket Common Front for Congo (FCC). Wargeyska The wargelinaysaa in barnaamijka loo gaadho, waxa ay u muuqataa, ayaa la kulmay ansixinta cod ee aan haysan meel u baadi.
Dhinaciisa, saddexda sadex-toddobaad ee AFRICA NEWS ayaa ka hadlaya madaxa: «Justin Okana: Hadafka dhabta ah ee CLC-ka, ADG been ah oo aan ka muuqan RVA». Force, ayuu qoray wargayska ku saddex-toddobaadle, Justin Okana doonayo inuu ku laabto Arimaha Board marinnadaada hawada (RVA). Si loogu guulaysto uu khiyaano cajiib ah, Okana ku salaysan yahay Madaxweynaha Decree No. 08 / 004 12 ka January 2008 si aad u hesho fulinta xukunka NCE 2385 iyo 28.929 iyo xukummadayda 30.149 buriyay in ay raalli by Maxkamadda ganacsan Kinshasa / Gombe. Weli, kiiska ayaa ka codsaday in ay saameyn joojinta xukunka asalka ah.
Théodore Ngangu iyo Gisèle Mbuyi / MMC
(TN / Haa)
DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha Sabtida 06 April 2019 - Afrika
DIB U EEGID AFRICA 08 04 19 - VIDEO
Diego Costa waa runtii murugo? - VIDEO
Hadalka Emmanuel Macron, "Xilliga ugu muhiimsan ee quinquennium" ee inta badan
England: Pogba oo ku jira kooxda Premier League ee sannadka, sida laga soo xigtay ciyaartoyda
Mareykanka: Madaxweyne Ku-xigeenkii hore ee Joe Biden Democratic Nomination Contest
3 Guriga Wanaagsan ee Weyn ee Daryeelka Caafimaadkaaga Nafsadeed - Hagaajinta Caafimaadkaaga